iWatermark ye-iPhone -Khusela kwaye ukhusele iifoto zakho ze-iPhone | Plum emangalisayo
Aprili 8, 2010
IWatermark ye-iPhone-Khusela kwaye ukhusele iifoto zakho ze-iPhone
UMHLA: 8 Epreli 2010
I-iWatermark sisixhobo esaziwa kakhulu sokujonga iifoto kwi-wat kunye neWindows kwiifoto zobuchule bokufota. Ngoku ikwi-iPhone kunye ne-iPad. I-iWatermark ikuvumela ukuba wongeze i-watermark yakho okanye ishishini kuyo nayiphi na ifoto okanye imizobo. Nje ukuba kongezwe le watermark ibonakalisa indalo yakho kunye nobunini bale foto okanye ubugcisa.
iWatermark ye-iPhone / iPad. Ikhonkco lokufunda ngakumbi lilapha: https: //plumamazing.com/iphone/iwatermarkUkufumana ngokuchanekileyo kwiVenkile ye-iTunes yiza apha: http: //is.gd/bjjmi
Kuphephe ukumangaliswa kokubona imifanekiso kunye / okanye imisebenzi yobugcisa kwenye indawo kwiwebhu okanye kwintengiso.
Kunqande ukumangalela okuneendleko ezinokubandakanyeka kwezi meko zokusetyenziswa gwenxa kwe-ip.
I-iWatermark ye-iPhone iza nemizekelo yokubhaliweyo (amagama, imihla, njl. njl.) kunye nemizobo (iisiginitsha, iilogo, njl. njl.) iiwatchark ongazisebenzisa kwangoko ukuvavanya iWatermark. Kodwa kungekudala uza kufuna ukwenza iitermark zakho. Unokwenza iitermark zakho zombhalo usebenzisa nayiphi na iifonti ze-4 ze-iPhone ngqo kwi-iWatermark. Iimpawu zemilambo yewindows ziyandisa uluhlu lwezinto ezinokwenzeka ngokutyikitya kunye neelogo. Ezi kufuneka zenziwe kwikhompyuter yakho (eneefonti kunye nobuchule obungakumbi, bona i-FAQ apha ngezantsi ukuze ufumane iinkcukacha ezingakumbi) kwaye emva koko idityaniswe kwi-iPhone isebenzisa iT iTunes kwilayibrari yemifanekiso. Kanye kwilayibrari yezithombe ungasebenzisa le mifanekiso uyenzileyo (njengawe ngokwakho utyikityo okanye uphawu) xa usenza i-graphic watermark ongayisebenzisa ngalo lonke ixesha kwi-iWatermark ye-iPhone.
Nceda ubhale kwaye usazise ukuba ucinga ntoni kunye neengcebiso zakho.
IPlum emangalisayo (ngaphambili iSoftware) yinkampani yabucala ebekelwe i-iPhone, iMac, iiWindows kunye nezicelo zeselula. IPlum Iyamangalisa ngumnikezeli wehlabathi jikelele wezicelo zesoftware kunye needesktop ukusukela ngo-1995. Bakwangabenzi bezi zixhobo ze-iPhone: Iindleko.
Iinkcukacha zoQhakamshelwano: UJulian Miller
IPlum emangalisayo SoftwareInfo ku: plumamazing.com